नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुग्यो, ५ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु – Online Bichar
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुग्यो, ५ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु
Online Bichar 28th May, 2020, Thursday 2:52 PM
झापा, १५ जेठ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुगेको छ । बिहीबार(आज) थप १ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुगेको बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । जसमा ९४० पुरुष र १०२ महिला रहेका छन् ।
झापामा बिहीबार थप २५ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशाला गरिएको पीसीआर परीक्षणमा झापामा थप २५ जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । यो सँगै झापामा संक्रमितको संख्या ७९ पुगेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरिएपनि संक्रमित भने थपिने क्रम तीव्र बनेको छ। निको भएर घर फर्कनेको संख्या १८७ पुगेको छ भने, कोरोना संक्रमितका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ जना पुगेको छ ।